Inyanga Yokuqwashisa Ngejubane: Kungani I-WebSpeed ​​Matters Infographic
Sibhale kancane mayelana ne izinto ezithinta ikhono lewebhusayithi yakho ukulayisha ngokushesha futhi sabelane kanjani isivinini esihamba kancane kulimaze ibhizinisi lakho. Ngimangazwa ngokweqiniso inani lamakhasimende esixhumana nawo asebenzisa isikhathi esiningi namandla ekuthengiseni nasekusebenziseni amasu wokukhuthaza - konke ngenkathi kulayishwa kumgcini ophansi onesiza elingalungiselelwe ukulayishwa ngokushesha. Siyaqhubeka nokuqapha ijubane lethu lesiza futhi senze ukulungisa njalo ngenyanga ukunciphisa isikhathi esisithathayo ukulayisha.
Isivinini esingasheshi siyakhathaza kubasebenzisi, ukuthengisa okunomthelela, isipiliyoni seselula, isipiliyoni samakhasimende, isikhundla sezinjini zokusesha nokuguqulwa; konke lokhu kuthinta imali yakho. Lokhu infographic kusuka Unamandla, ihamba ngezifundo eziyishumi nambili ezibonisa ukuthi ukuthuthukisa isikhathi sokulayisha ikhasi kuthinte kanjani imiphumela yebhizinisi:
mPulse mobileIzinga lokuguqulwa liyi-1.9% lapho amakhasi elayisha ngemizuzwana engu-2.4, kepha lokho kwehlela ku-0.6 uma seqe izikhathi zokulayisha zesekhondi ezi-5.7.
Yahoo! Ithrafikhi inyuka ngo-9% uma behlisa isikhathi sokulayisha ikhasi ngamasekhondi angu-0.4.
Amazon bangalahlekelwa ama- $ 1.6 billion emalini engenayo yonyaka unyaka ngamunye uma isikhathi sabo sokulayisha ikhasi besingu-1 second slow.
Bing ibika ukuthi ukubambezeleka kwamasekhondi amabili kuholela ku-2% imali elahlekile isivakashi ngasinye, ukuchofoza okumbalwa okungu-4.3%, kanye nemibuzo yokucinga embalwa ka-3.75%
I-SmartFurniture ukuthuthuka kwejubane kubazuzele ama-20% kuthrafikhi ephilayo, ukwanda okungu-14% kokubukwa kwamakhasi, nokukhuphuka kwamazinga ngokulinganisa kwezikhundla ezi-2 ngegama ngalinye elingukhiye.
Shopzilla iveze ukuthi amakhasi asheshayo aletha ukuguqulwa okungu-7% kuye ku-12% kunamakhasi ahamba kancane.
Microsoft ibika ukuthi ukubambezeleka okungama-millisecond angama-400 kunganciphisa ivolumu yemibuzo ngo-0.21%.
Firefox ithi ukunciphisa izikhathi zokulayisha ezijwayelekile ngemizuzwana engu-2.2 kungakhuphula ukulanda ngo-15.4%.
-Google ibika ukuthi ukwandisa ukubambezeleka ngama-millisecond ayi-100 kuya kwangama-400 kunciphise ukuseshwa kwansuku zonke ngo-0.2% no-0.6% ngokulandelana.
I-AutoAnything wehlise isivinini sokulayisha ikhasi ngesigamu futhi wazibonela ukwanda okungu-13% kokuthengisa kanye nokwenyuka okungu-9% kwamazinga okuguqulwa.
U-Edmunds iphuce imizuzwana engu-7 isikhathi sokulayisha futhi yabhekana nokwenyuka okungu-17% kokubukwa kwamakhasi kanye nokwenyuka okungu-3% kwemali engenayo yesikhangiso.
EBay futhi Walmart zithuthukise izikhathi zazo zejubane lekhasi, kwaholela ekwandeni cishe kuwo wonke amamethrikhi wokuzibandakanya nokuguqulwa esizeni!
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi awudingi ukudela ukwakheka kwejubane. Sisize inkampani eyaziwayo yebhizinisi ebitshale imali endaweni yokuqamba kabusha futhi emangalisa ngokuphelele. I-ejensi yokuklama abayikhethile yakha ingqikithi enhle kusukela ekuqaleni, iphrojekthi ebiza kakhulu. Lapho bethula isiza kumthengisi we-premium hosting, amakhasi ayelayishwa ngemizuzwana engu-13 +, engamukeleki kubasebenzisi abaningi. Sithole ithani lezingqinamba - kufaka phakathi imibhalo engadingekile yokulayisha isayithi ububanzi, amavidiyo angenzwanga ubuhle, izithombe ezingacindezelwanga, inqwaba yemibhalo yangaphandle, namashidi wesitayela amaningi. Kungakapheli amasonto ambalwa, saba nokulayishwa kwesayithi kumasekhondi ama-2 sisebenzisa amasu amaningi.
Inhlangano yethu, DK New Media, ikhombe futhi yalungisa ithani lezinkinga - kufaka phakathi imibhalo engadingekile yokulayisha isayithi ububanzi, amavidiyo angenzwanga ubuhle, izithombe ezingacindezelwanga, inqwaba yemibhalo yangaphandle, namashidi wesitayela amaningi. Kungakapheli amasonto ambalwa, saba nokulayishwa kwesayithi kumasekhondi ama-2 sisebenzisa amasu amaningi. Ukulungisa isiza akuzange kushintshe isipiliyoni sokwakha nakancane - kepha kuthuthukise ngokusobala ulwazi lomsebenzisi.
Tags: Ukulayishamaxcdnmpulseumthwalo wekhasiisikhathi sokulayisha ikhasiisivinini sekhasiisikhathi sokulayisha ikhasiiphelelwe amakhasiijubaneamathuluzi wejubaneunogwajaisivinini sewebhuisivinini sewebhusayithiwebspeed